Ngwaọrụ Corded, Grinder Angle, Demolition Hammer - Benyu
Ngwaọrụ dị ọcha
AKW DRKWỌ AKW .KWỌ
Ngwaọrụ na-adịghị mma
CORDLESS ANGLE MGBE
CORDLESS HAMMER DILLR.
CORDLESS HAMMER DILLỌ ỌRỌ ỌR.
AKWORDKWỌ AKW .KWỌ
Ọ dị mfe ibugharị, dị mfe ịrụ ọrụ na ebe dị elu na oghere dị warara
Arọ arọ rotary hama mere maka ọkachamara ọrụ
Ezigbo mma, arụmọrụ dị elu na njirimara ergonomic enyi na enyi
Zhejiang Benyu Tools Co., Ltd. (aha mbụ Zhejiang Zhongtai Ngwaọrụ), tọrọ ntọala na 1993, bụ ọkachamara na-emepụta ngwaọrụ ndị ọrụ ike na China. Site na ihe karịrị afọ 27 nke ịrụsi ọrụ ike na-aga n'ihu ọhụrụ, ụlọ ọrụ ike arụmọrụ usoro nke R & D, n'ichepụta, ahịa na mgbe-sales ọrụ.
Oma ogbe 26MM BHD 2630
Nrụ ọrụ dị arọ rotary hama 26MM BRH2618
Mmetụta malite ịgba 13MM BID1303
Cordless Brushless n'akuku grinder Bl-jm1001 / 20v
Cordless Hammer malite ịgba Dc1001 / 12v
Cordless Brushless spana Bl-bs1003 / 20v. Cordless Brushless Spana Ntanaka-bs1003 / 20v
Mmetụta Na-enweghị Mmetụta Brushless-cjz1301 / 20v
Ngosipụta Ngosipụta Akụrụngwa China nke 2020
China International Ngosipụta Ngosipụta (CIHS) hiwere na 2001. N'ime afọ iri gara aga, China International Hardware Show (CIHS) na-agbanwe maka ahịa, ụlọ ọrụ ọrụ ma zụlite ngwa ngwa. Emechaala nke ọma dị ka ihe ngosi akụrụngwa nke abụọ kachasị n'ụwa mgbe INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE dị na Germany.
Ọnọdụ Ahịa Ahịa Ahịa
Ka ọ dị ugbu a, n'ihe banyere usoro azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ngwa ọrụ China, akụkụ ya na-egosi atụmatụ "e-commerce tool", na-eji thentanetị eme ihe dị ka mgbakwunye na ọwa ahịa; mgbe ị na-enye ngwaahịa ndị dị ọnụ ala, ọ nwere ike iji amamihe dozie isi ihe mgbu ụlọ ọrụ na-emighị emi. Mwekota nke uzo elu na ala nke Intanet na ulo oru ihe eji enyere ndi ahia aka izoputa ego,
Tụnyere nke ụlọ ọrụ na ngwá ọrụ ndị mba ọzọ
Ngwaọrụ ndị mba ọzọ na-etinye uru dị ukwuu maka uru ụlọ ọrụ. Ndị ibe ya na-adabere na enyemaka na ego ha na-enweta. A na-ekpochi ndị ahịa ebumnuche nke ngwaọrụ ụlọ na nke mba ọzọ na mbido, ụlọ ọrụ akọwapụtara na ụlọ ọrụ nwere atụmanya azụmaahịa. Ha kpebisiri ike ịnye ha ihe onwunwe ndị na-enweghị na mmalite mmalite nke uto iji nyere ha aka inweta mmụba ngwa ngwa na uru azụmaahịa.